Wararkii Ugudambeeyey ee Karantiilka iyo Dabagalka Ka Agdhowaanshaha - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools/District News/Wararkii Ugudambeeyey ee Karantiilka iyo Dabagalka Ka Agdhowaanshaha
Wararkii Ugudambeeyey ee Karantiilka iyo Dabagalka Ka Agdhowaanshaha
Summary: SPS waxay sii wadi doontaa inay la socoto heerarka COVID-19 ee dugsiyadeena waxayna diyaar u noqon doontaa inay wax ka qabato haddii loo baahdo.
Waji-xidhka ayaa hadda ah ikhtiyaar inta badan gudaha iyo bannaanka Dugsiyada Dadweynaha Seattle oo ay ku jiraan basaska jaalaha ah. Waxaa sabab u ah dadaalkeenna wadajirka ah oo aan hadda mareyno meeshii ay bulshadu ka bedeshay. Tani waxay ahayd isbeddel weyn, waxaanan aqoonsannahay dareenka ku lug leh. Waxaan kaaga mahadcelineynaa dulqaadkaaga iyo ixtiraamka xulashada indho-shareerka ee dadka kale.
Isbeddel kale oo muhiim oo fiiro mudan sida ay qabto Waaxda Caafimaadka (DOH), ardayda iyo shaqaalaha uu la kulmay COVID-19 (xidhiidh dhow) uma baahna in la karantiilo iyada oo aan loo eegin heerka tallaalka, laakiin waa in ay sii wadaan la socodka astaamaha. Qof kasta oo leh astaamaha COVID waa inuu guriga joogo. Imtixaanku wuxuu ku sii socon doonaa in lagu bixiyo dugsiga ardaygaaga.
Si loo waafajiyo hagida DOH ee dib loo eegay, kaliya shaqsiyaadka khatarta sare leh ayaa la ogeysiin doonaa soo-gaadhista suurtagalka ah. Sida had iyo jeer, gacmo-dhaqashada soo noqnoqda ayaa weli si adag loogu talinayaa. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dib u eegto qaaimadda joogtada DOH ee cusub si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.
Waji-xidhka iyo borotokoollada karantiilku way isbeddeleen, laakiin lakabyo kale oo ilaalin ah ayaa weli jira oo ay ka mid yihiin:
Helitaanka tallaalka iyo xoojinta ee xarumaha SPS
Ardayda, shaqaalaha, iyo booqdayaashu waa inay guriga joogaan markay ay isku arkaan astaamaha COVID
Qolalka daryeelka caafimaadka ee dhawrsoon
Fursadaha baaritaanka COVID-19
Waji-xidh loogu talagalay ardayda iyo shaqaalaha, kuwaas oo raba inay sii wadaan indho-shareerka
Kala fogaanshaha ilaa inta suurtogalka ah
Kordhinta hawaynta (HVAC) iyo tijaabinta tayada hawada
Waxaan ku faraxsanahay in kiisaska COVID-19 ay hoos u dhacayaan dugsiyada SPS iyo King County. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara waqtiyo aan u baahan doono inaan soo celino dhimis wax ku ool ah, oo ay ku jiraan waji-xidhka caalamiga ah, haddii ay korodho COVID-19 fasalka ama dugsiga oo dhan. SPS waxay sii wadi doontaa inay la socoto heerarka COVID-19 ee dugsiyadeena waxayna diyaar u noqon doontaa inay wax ka qabato haddii loo baahdo.
Waad ku mahadsan tahay iskaashigaaga joogtada ah iyo ballanqaadka bulshada dugsigeena iyo ardaydeena.
Xafiiska Hawlgelinta Istaraatiijiyadda iyo Ka-jawaabista
Maaskaraha waa ikhtiyaar xirashadiisa dugsiyada SPS ardayda iyo macalimiinta laga bilaabo March 14
Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa laga qaadi doonaa xirashada maaskaraha waxayna bilaabaneysaa Isniinta , March 14.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaanay in masiibadu aysan dhamaani, waxaana ognahay in kor u kaca iyo noocyo cusun ay suurtagal yihiin…